MY REMEMBRANCE: ဂူဂဲလ် (google) တစ်လုံး ရေလဲသုံး
တစ်ချို့ ကလည်း သူ့ကို ဂေါ်ဂဲလို့ဖတ်သလို တချို့ကလည်း ဂူဂဲလ် (google) လိုဖက်ကြသဗျ။ ဘယ်လိုပဲ ဖတ်ဖတ် သူဟာ ကျတော်တို့ရဲ့ လက်ဆွဲတော် ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်တစ်ခုပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုက တော်တော်များများက သူကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးမချတက်ကြဘူး။ သာမန် သူသူ ငါငါ ရှာသလောက်ပဲ အသုံးချတက်ကြတယ်။
ကျတော်ကတော့ သူကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် ၇ှာဖို့အတွက် သုံးတယ်။ သူဟာသိပ်ကို လည်းအစွမ်းထက်တယ်။ ဥပမာ.. ကျတော်ရုံးမှာ သုံးတာက outlook mail ဗျ။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ကျတော် outlook ကို လုံးဝ မသုံးဖူးဘူး။ ကြားတော့ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးတယ်။ တခါတလေ ရုံးမှာ အဲ့ဒီ outlook look ကို ဟိုပြောင်းချင် ဒီပြောင်းချင် လိုရှိရင် ရုံးက လူတွေက မပြောင်းတက်ကြဘူး။ ဟိုသူကိုမေး ဒီသူ့ကိုမေး.. နောက်ဆုံးမရရင် ပါလေရာ ကျတော်ဆီရောက်လာရော။ ကျတော်ကလည်း အရာရာသိနေသူမဟုတ်တော့ တခါတလေ သိတာလေးကို ရွှီးပေါ့။ မသိရင်တော့ ဂူဂဲလ် (google) လေးကို ခေါ်သုံးလိုက်တာပဲ။ ဂူဂဲလ် (google)က အဖြေလေးတွေနဲ့ ဖောရွှီးလုပ်လိုက်။ ဟုတ်နေတာပဲ။
တခါက ရုံးမှာပါပဲ။ အမေရီကန်က အမ်ဘီအေ ယူထားတဲ့ ဘောစ် H2SO4 ကိုမသိလို့ ဟိုသူ့မေး ဒီလူမေး။ ကျတော်တို့ရဲ မန်နေဂျာ ntu ကျောင်းဆင်းကြီးကလည်း သိဘူးတဲ့ဗျ။ ကျတော်လည်း သိတောသိတယ် H2SO4 ဆိုတာ hydrogen sulphate လား. Sulphite လား. Sulphuric အက်ဆစ်လား မသဲကွဲဘူးဖြစ်နေတယ်။(တီချယ် ဒုံကြီးတို့။ တီချယ်ဒေါ်ပြုံး တို့သာ ကျတော်ဒီလို ၀ါးတားတားလုပ်နေတာ သိရင် ဗိုက်ခေါက်ဆွဲလိမ်မှာ…) မကြာခင်ကျတောကို မေးတော့မယ် ဆိုတာ သိတော့ ဂူဂဲလ် (google)လေးကို ခေါ်ပြီး ကြိုမေးထားလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး အဖြေပြောပေါ့။ ဒီလိုပဲ လုပ်စားနေတာ။။
နောက် ခင်ဗျား စာအုပ်တွေ ရှာချင်တယ်ဗျာ.. ဟော ဂူဂဲလ် (google) book လေးမှာရှာဗျာ။ အမြည်းပဲဖတ်လို့ ရတယ်လို့ ခင်ဗျားပြောမလို့လား။ အဲဒီမှာ အမြည်းဖတ်ကြည်။ စာအုပ်ကို ကြိုက်ပြီလား။ နည်းနည်းစိတ်ရှည်၇ှည် ထားပြီး နောက် စာမျက်နှာတွေလိုက်ဖက်ကြည့်။ တစ်ချို့တွေမှာ ခင်ဗျား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့၇တဲ့ လင့်တွေ ပေးထားတယ်။ ဒေါင်းလိုက်ရင်ရပြီ။ မရသေးဘူးလား။ ဟဲဟဲ.. google book ကနေ google blogs ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ ရှာဗျာ။ အဲဒီမှာလုံးဝ တွေ့မယ်။ အနည်းဆုံး rs ကနေ ခင်ဗျား ဒေါင်းဖို့လင့်၇မယ်။
ဟော ဂူဂဲလ် (google) နဲ့ ကျတော်တို့ ဇော်ဂျီလေး ပေါင်းလိုက်တော့ အတိုင်ထက်အလွန်ပေါ့။ ဥပမာ.. ကျတော် ဟိုတလောက ကော်ပြန့် အရမ်းစာချင်တယ်ဗျာ။ ကော်ပြန့်ရွက်ကိုအင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိဘူး။ ဒါနဲ့ ဂူဂဲလ် (google) မှာ “ကော်ပြန့်”လို့ရိုက်လိုက်တယ်။ ဟောပေါ်လာပါပြီ။ ပြီးတော့ ရုံးက စလုံးမကို မေးကြည့်တယ်။ ဂူဂဲလ် (google) က ဓါတ်ပုံလေးပြပြီးတော့ ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့။ အရွက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ ဘယ်မှာရောင်းလဲ။ ဟဲဟဲ နောက်ဆုံး အိုကေ ဆိုပြေသွားတယ်ဗျာ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့လည်း ကျတော့ လိုလုပ်စားတက်အောင်လို့ အနည်းငယ်သော ဥပမာလေးတွေ သိသလောက်လေးမျှပေးတာဗျ။ ဂူဂဲလ် တွစ်လေးတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ နောက်မှ သပ်သပ်မျှတော့မယ်။
Posted by puluque at Tuesday, October 07, 2008
google ကတော့ စွယ်စုံရ ဘိုးအေကြီးပဲကိုး။ လိုတိုင်းတ ရပါစေသား ဆိုတာ google မှ အစစ်။ (လိုတရ အမွှေးတိုင် ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီ):P